1937 (February 23): Sithagu Sayadaw (nke aha ya bụ Ashin Nyanissara makwaara) mụrụ.
1939 (February 18): U Tilawka Bhivamsa (nke a makwaara dị ka Insein Ywama Sayadaw) mụrụ.
1968 (July 10): U Wirathu (nke aha ya bụ Ashin Vicittasārābhivamsa mara) mụrụ. ("Wirathu" bụ aha pen na pụtara dike).
2003: A mara U Wirathu mkpọrọ na ebubo, nke a na-arụrịta ụka, nke mkpalite nke ime ihe ike megide ndị Alakụba.
2012 (Jenụwarị 13): A tọhapụrụ U Wirathu n'ụlọ mkpọrọ, ya na ọtụtụ ndị mkpọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, dịka akụkụ nke mgbanwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị bidoro na 2011.
2012 (June na Ọktọba): Ebili nke ime ihe ike Buddhist-Muslim mere na steeti Rakhine, nke kachasị emetụta obodo Rohingya.
2012 (October 30): Eburu ụzọ na MaBaTha, nke akpọrọ 969 n'oge a, na Mawlamyine (nke bụbu Moulmein) Mon steeti.
2013 (Machị 20-22): Nnukwu ihe ike na-emegide Alakụba mere na Meiktila (Central Myanmar), na ebubo nke itinye aka 969.
2013 (Septemba 2): Kọmitii Sangha Mahanayaka nke State (MaHaNa) nyere iwu igbochi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ojiji nke akara 969, yana okike nke otu nzukọ ndị metụtara akara.
2013 (June 26-27): MaBaTha nwere nzukọ mmeghe na Insein, nke dị na Yangon. MaBaTha bu ihe omuma nke Burmese Ah-myo Batha Thathana Saun Shaung Ye a-Pwe, nke a na-asụgharịkarị n’asụsụ Bekee dị ka Organizationtù Na-ahụ Maka Nchedo Ọsọ na Okpukpe.
2013-2014: MaBaTha bidoro mkpọsa iwu ga-echekwa "agbụrụ na okpukperechi" megide ebubo "islamization" nke Myanmar.
2014 (Jenụwarị 18): MaBaTha nwetara ikike mba site na mgbakọ nke ndị mọnk 10 000 na Mandalay nke gosipụtara amụma ya na "Nkwupụta 10 isi."
2014 (May-June): Nchegbu bụ isi nke ndị mọnk nke 969 na ndị mọnk MaBaTha bụ nchebe nke ọdịmma akụ na ụba Buddhist n'oge nnwere onwe akụ na ụba na itinye ego nke mba ọzọ, ha haziri mkpọsa ịgba izu megide ụlọ ọrụ telecom nke Qatar, Ooredo.
2014 (September 30): U Wirathu bịanyere aka na Memorandum of Understanding na Bodu Bala Sena na ihe omume dị elu na Colombo, Sri Lanka.
2015: (Mee-August): Mgbe mkpọsa siri ike na nnukwu esemokwu, ngwugwu nke "agbụrụ na iwu okpukpe" anọ gafere na nzuko omeiwu ma banye na President Thein Sein.
2015 (November 8): Myanmar mere ntuli aka mbụ ya na November 2015, mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri ise nke ọchịchị ndị agha. MaBaTha gosipụtara nkwado maka ndị otu na-achị Union Solidarity and Development Party (USDP).
2016 (July 12): National League of Democracy (NLD) weghaara ike gọọmentị na February 2016, mgbe ha merisịrị ntuli aka 2015. Site na ngbanwe nke ike gọọmentị, MaHaNa belatara nkwado ya na MaBaTha site na ịgọnarị otu nkwado dị ka nzukọ ndị mọnk iwu kwadoro.
2017 (March 10): Mgbe ebubo nke okwu ịkpọasị Muslim, ndị MaHaNa machibidoro U Wirathu ikwu okwu ihu ọha na ikwusa ozi ọma otu afọ. Emere mkpebi a ụbọchị ole na ole mgbe U Wirathu gosipụtara nkwupụta ihu ọha na mkpochapụ nke onye ọka iwu na-achị iwu na Myanmar, U Ko Ni, onye bụ onye Alakụba.
2017 (May 23): MaHaNa belatara nkwado ya maka MaBaTha, na-ekpebi na aha "MaBaTha" anaghị agbaso iwu 1990 metụtara Iwu, angtù Sangha nakwa na a ga-ewepụ ihe ịrịba ama na MaBaTha niile na July 15 2017.
2017 (July 7): N'ihi mkpebi May 23 banyere aha ya, MaBaTha gbanwere aha ya na Buddha Dhamma Parahita Foundation, na-ekwusi ike na profaịlụ ya.
2017 (October 30): N’etiti oke ihe ike megide ndị nkịtị Rohingya na Northern Rakhine, Sithagu Sayadaw kwuru okwuchukwu nye ndị agha Burmese ebe o kwuru banyere akụkụ esemokwu na Mahavamsa, ihe odide Buddhist oge ochie nke Lankan, nke gburu ndị na-abụghị ndị Buddha bụ ihe ziri ezi iji chebe okpukpe Buddha.
MaBaTha, nke 969 [Foto dị n'aka nri] bụ onye bu ụzọ na Buddha Dhamma Parahita Foundation bụ onye na-anọchi anya ya dịka nke 2017, abụghị akụkọ ihe mere eme pụrụ iche. Site n'oge ọchịchị gaa n'ihu, ndị mọnk Buddhist rụrụ ọrụ dị mkpa site na ikere òkè na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na igosipụta onwe ha ma na-eme dị ka ndị nche nke ọdịnala, agbụrụ, na okpukpe. Dị ka Sri Lanka, Burma / Myanmar nwere akụkọ ihe mere eme nke ndị otu Buddhist na-enye nsogbu, ndị ebumnuche ha bụ "weghachite Buddha" na "ọnọdụ kwesịrị ya" n'ime ọha mmadụ mgbe ọchịchị kwụsịsịrị ọdịnala Buddhist ọdịnala. Ọzọkwa, ebumnuche nke okpukpe Buddhist na nke a na-emegide Muslim nwere ike ịmaliteghachi iguzogide ọchịchị ndị ọchịchị Britain na ịrị elu nke mkpakọrịta mba, dịka na -atọ ụtọ, ma ọ bụ mkpakọrịta “vinghụnanya Onye Ahụ”. Okpukpe Buddha malitere ịrụ ọrụ dị mkpa na mba Burmese, U Uttama, otu n'ime ndị isi mọnk na ndị isi nnwere onwe nnwere onwe Burma nwere njikọ chiri anya na na -atọ ụtọ. Tụkwasị na nke ahụ, e guzobere ọtụtụ narị ndị Buddha iji chebe Buddha (Turner 2014). Buddhist revivalism a juputara na agbụrụ ndi isi, na-eduga na okwu a ma ama "bebụ onye Burmese bụ ịbụ onye Buddha," nke Mentù Buddhist Ndị Menmụaka na-eto eto na mmalite nke narị afọ nke iri abụọ (Schober 2009).
N'oge ụfọdụ, ọrụ dị ka onye nchebe nke Buddha egosiwo na ịnakwere iji ime ihe ike eme ihe. Dịka ọmụmaatụ, na ndị mọnk Buddhist 1930s sonyeere ọgba aghara a na-akpọ Indo-Burman na Rangoon, na-egosi ma ịdị njikere itinye aka na mmekọrịta ọha na eze, yana itinye aka na ime ihe ike. Ya mere, n'adịghị ka echiche ndị Western na-ewu ewu banyere Buddha, njikọta Buddha na ime ihe ike abụghị ihe a ma ama na akụkọ Buddha, ọ bụ ezie na mmekọrịta dị n'etiti ha abụọ bụ isiokwu nke ihe ijuanya na-enweghị isi site n'aka ndị ọgụgụ isi Buddha, ma ọ bụ, ruo n'oge na-adịbeghị anya, site na ndị ọkà mmụta ọdịda anyanwụ (lee eg Frydenlund 2013, 2017; Jerryson 2011). Ekwesiri ighota na, n'ozuzu, ndi mọnk Buddha adighi eme ihe ike n'onwe ha, kama ha nwere ike ibinye ikike okpukpe ha iji kwado ime ihe ike ma oburu na mgbe ahuru Buddhist na nsogbu.
Ndi ochichi bu Burma / Myanmar n'etiti 1962 na 2011 wuru na ochichi nke opacity, echiche ndi mmadu, nyocha na ime ihe ike. Ebumnuche, ọ dabere na "Burmese socialism," mmekorita ọdịbendị, ịdị n'otu na ịdọ aka ná ntị, echiche ịdị n'otu na-akpọkarị "burmanization" (ma emesịa jiri aha mba gbanwere) dị ka "myanmafication" (Houtmann 1999). Mgbalị ndị a nke ịdị n'otu so na amụma mwepu nke akọwapụtara "Ndị ọzọ" ruo n'ókè mmadụ nwere ike ikwu maka steeti zụlitere "Indophobia." Iwe a banyere obodo ndị agbụrụ India na nke okpukpe dị iche iche bụ nsonazụ nke "ọgbaghara nke colonial" nke ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba nke ndị India kpatara n'oge ọchịchị ndị Britain, na nke ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị agha zụlitere ma rie ya na post-Independent Burma (Egreteau 2011). N'ime iri afọ gara aga, nkwupụta okwu megide India na mgbochi Indian (n'ihe gbasara iwu ụmụ amaala na mmemme mba) ewerela ụzọ doro anya megide Muslim, ebe obodo ndị ọzọ Burmese Indian nke Sikh, Hindu na Ndị Kraịst na-eche obere ịkpa oke taa. Ya mere, Buddhist na-atụ egwu Islam nke anyị na-ahụ na Myanmar taa, nwere mgbọrọgwụ akụkọ ihe mere eme n'ime ọchịchị ndị agha n'onwe ya na ọchịchọ ya maka ịdị n'otu mba na ịchịkwa Union of Burma dị mgbagwoju anya na nke isi ike. Ihe onye ọkà mmụta banyere ihe banyere mmadụ bụ Michael Gravers (1993) kpọrọ mkparịta ụka ịhụ mba n'anya nke oge nnwere onwe bụ njikọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahaziri nke jikọtara egwu nke mbibi nke njikọta na nke steeti na njigide nke ndị ala ọzọ na ọdịda nke ọdịnala Burmese. Usoro a ejirila ikike mba ọzọ ma ọ bụ ọnụnọ ya na colonialism. Ndị mba ọzọ akọwapụtara bụ ndị a ghọtara dị ka ụmụ India, ndị Rohingyas ọkachasị.
Ka o sina dị, ọ bụ ezie na o doro anya na enwere ike ịchọta echiche ndị Alakụba na oge ọchịchị na nke ndị agha xenophobic agha, omume ndị Alakụba na-emegide n'oge na-adịbeghị anya (Schissler et al. 2017). Kemgbe 2012, echiche ndị Alakụba, ịkpọasị asị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ụjọ na-achịkwa okwu ihu ọha na Myanmar (Kyaw 2016; Walton na Hayward 2014). Akọwawo echiche dị otú ahụ dị ka nsonaazụ nke gọọmentị na / ma ọ bụ atụmatụ ndị agha, mana ekwesịrị ịkọwa ha dị ka mmeghachi omume na enweghị ntụkwasị obi nke enweghị nsogbu n'ihi mgbanwe mgbanwe akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze kemgbe usoro mgbanwe Myanmar malitere (Walton et al. 2015 ). Dị ka Schissler et al gosipụtara. (2017), ụdị nkwenkwe a na-emegide Muslim yiri ka ọ zuru ebe nile na Buddha Buddha, ndị mọnk Buddhist jikọtara ya na ọha na eze na ụyọkọ nke mmekorita Buddhist na-ejikọta ọnụ, nke kachasị ibu bụ 969 (netwọk a haziri ahazi) na MaBaTha, nke bu ulo oru guzobere.
Ndi MaBaTha kpuchiri 969, onye bu ụzọ nye MaBaTha site na 2014. Onye nke a gbanwere aha ya na 2017 na Buddha Dhamma Parahita Foundation, mana a ka na-akpọ ya aha ochie ya, MaBaTha. Na mgbakwunye na 969 na MaBaTha, ọtụtụ ndị mọnk ndị ọzọ na ndị nkịtị na-arụ ọrụ iji kpuchido Buddha site na nsogbu ndị Islam kwuru.
Na 2012, otu ndị mọnk Buddhist na-eto eto na Mawlamyine (nke a na-akpọbu Moulmein), isi obodo Mon steeti na ndịda ọwụwa anyanwụ Myanmar, guzobere netwọkụ iji “chekwaa okpukpe Buddha” a na-akpọ 969. Aha a sitere n'ike mmụọ nsọ site n'akwụkwọ e bipụtara na 1997 nke U Kyaw Lwin, onye bụbu onye isi na onye ntụzịaka nke Mịnịstrị gbasara Okpukpe. 969 na-ezo aka n'àgwà iteghete nke Buddha, isii nke Dhamma na itoolu nke Sangha. N'akọrọ ọnụ a mejupụtara “Achịcha atọ nke okpukpe Buddha,” wee si na ya pụta na akara akara Buddhist Theravada. Ọzọkwa, "969" na-anọchi dị ka discursive mgbochi tesis ka "786," ​​nke bụ onuogugu nnọchite nke amaokwu mbụ nke Qur'an, ma na-egosipụtakarị na ụlọ ahịa ndị Alakụba na South na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Netwọk na-arụpụta arịa, dị ka akwụkwọ mmado na ọkọlọtọ nwere akara 969 na ha. Ihe nnọchianya ahụ gosipụtara ọkọlọtọ Buddha, nọmba 969 na edemede Burmese na ogidi Emperor Ashoka, nke ikpeazụ bụ otu n'ime akara ngosi kacha ochie nke ike ọchịchị Buddha. N’oge na-adịghị anya, egosiri ụdị ihe nnọchianya ndị a na ụlọ ahịa na tagzi na Buddha niile nke Buddha, dị ka ihe ịrịba ama nke ịdị n’otu Buddhist gafere ókèala ala na nkewa agbụrụ dị na mba ahụ, kamakwa dị ka akara akara akara maka ndị na-echekwa ụlọ ahịa ndị Alakụba bụ ndị e gosipụtara ihe egwu aku na uba. Ndi mọnk 969 gosipụtara onwe ha ka ha bụrụ ndị na-arụ ọrụ nke ọma maka usoro nkwukọrịta dị ka okwuchukwu, mgbasa ozi na ihe nkiri vidio, mana, yana mgbanwe ịntanetị (ebe ọ bụ na nnwere onwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị 2011), yana usoro mgbasa ozi ọhụụ dịka Facebook na YouTube. Ulo saịtị U Wirathu nwere na mmalite nke 2017 dị nso ndị na-eso 265 000, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu na gburugburu Burmese.
Ndị mọnk 969 aghọwo ndị na-ese okwu maka nguzogide siri ike nke Alakụba, onye ama ama bụ U Wirathu, onye nnochite anya 969, onye ghọrọ onye mgbasa ozi mba ụwa mgbe ọ nọ na a Time Magazine nhomawa a ekura asɛmti “Buddhist Face of Terror” (Mmofra a Wonni Buronya)Time Magazine, Europe, Middle East na Africa mbipụta, July 1, 2013: 1). [Foto dị n'aka nri] E boro ya ebubo na ọ kpọrọ asị megide ndị Alakụba na mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbe okwuchukwu okpukpe. A tụrụ ya mkpọrọ na 2003 site n'aka ndị agha maka ịmalite ime ihe ike megide Muslim, mana ewepụtara ya na 2012, yana ndị mkpọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, dịka akụkụ nke mgbanwe mbụ nke Onye isi ala Thein Sein. Ebumnobi kpatara mkpọrọ ya ka na-arụ ụka. U Wirathu n'onwe ya gọnarrị ebubo eboro ya. Fọdụ n'ime ndị mkpọrọ ibe ya kwenyere na ihe kpatara ya bụ esemokwu ndị mọnk dị n'ime, na ebubo mmegide nke ndị Alakụba bụ dị nnọọ a pretext iwepu esịtidem mmegide (Iselin Frydenlund, ajụjụ ọnụ, Bangkok na Yangon, 2015). [Foto dị n'aka nri]
Site na mmegharị 969 na-etolite na njikọ ahụ, mana kewapụrụ MaBaTha, nke bụ mgbatị maka Ah-myo Batha Thathana Saun Shaung Ye a-Pwe, ma ọ bụ “Organizationtù Na-echebe Agbụrụ na Okpukpe.” E hibere nzukọ a na June 2013, ma e jiri ya tụnyere 969, ọ nwere profaịlụ dị obere na obere ọgụ. Ndị mọnk MaBaTha ndị a ma ama, dị ka Sithagu Sayadaw, nwere ọkwá dị elu n'ọkwá ndị mọnk na Myanmar ma ọ bụ otu n'ime ndị mọnk a ma ama na ndị a na-akwanyere ùgwù. MaBaTha enweela ihe ịga nke ọma n'ịzụlite njikọ gafee nkewa ndị mọnk na mmekọrịta chiri anya na ndị isi ndị mọnk. O wulitela nkewa siri ike ma soro ndị gọọmentị na-eduzi n'ọchịchị gọọmentị nke ọkara gara aga rụọ ọrụ. Ndi otu abuo di iche, ma ha nwere njikọ chiri anya dika otutu ndi mọnk 969 na-aru oru na MaBaTha.
N'oge ntọala ya, na n'ọtụtụ nnọkọ mba ndị sochiri, ndị MaBaTha nwere nkwado sitere n'aka ndị isi nke MaHaNa (State Sangha Mahanayaka) (n'agbanyeghị, ọ dị mkpa, ọ bụghị nkwenye nke ụlọ ọrụ gọọmentị). Iji maa atụ, Bamaw Sayadaw Ashin Kumara Bhivamsa, Onye isi oche nke MaHaNa, kwuru okwu na nzukọ abụọ nke ntọala MaBaTha. 969 na MaBaTha nwere ihe ịga nke ọma n'okpuru ọchịchị ndị nkịtị nke Onye isi ala Thein Sein mana ha tufuru ọtụtụ n'ime nkwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya mgbe National League for Democracy (NLD) batara na Febụwarị 2016. Kemgbe ahụ, ụlọ ọrụ steeti na-elekọta ndị mọnk Buddhist ịtụ (MaHaNa), belatara nkwado ya na MaBaTha, nke mbụ na 2016 site na ịkpọ aha ndebanye aha ya na ajụjụ, ọzọkwa na Mee 2017 site na ịkọwa usoro adịghị mma na ịrịọ maka iwepụ otu mbadamba ihe na mba ahụ. Nye ọtụtụ ndị na-ekiri ihe na mpaghara na mba ụwa ka ewere nke a dị ka ihe ịrịba ama nke mgbochi NLD-gọọmentị megide echiche ndị Alakụba na okpukpe mba. Agbanyeghị, mgbe mmadụ ji nlezianya gụọ nkwupụta MaHaNa, o doro anya na ọ pụtaghị na amachibidoro mmegharị ahụ. Kama nke ahụ, a ga-agụrịrị ihe mgbaàmà sitere na MaHaNa dị ka mbelata nkwado gọọmentị, ọ bụghị dị ka mmachi nke mondhist Buddhist nchedo mmegharị (Walton na Tun 2016).
Isi nchegbu nke 969 na MaBaTha bụ nchebe nke a-Myo (agbụrụ / agbụrụ / mba) na nke ahu (Pali: sasana), nke ikpeazu na-arutu aka na okpukpe Buddha dika mmekorita, omenaala na nhazi n’uwa a. Dabere na nkeji si nzukọ mmeghe nke MaBaTha na 2013, ozi nke MaBaTha nwere atọ: (a) iji mee ka ọha na eze mata banyere mkpa ọ dị maka ichekwa agbụrụ na ihe egwu nke esemokwu okpukpe, (b) iji mee ka udo dịrị n'etiti okpukpe dị iche iche na Myanmar site na “ịdị n'otu na ndozi nke ịdọ aka ná ntị,” na (c) iji chebe “agbụrụ na okpukpe n'okpukpe.” Iji mezuo ebumnuche ndị a, MaBaTha na-ele anya itinye aka na mbụ, na mgbasa nke ọha dhamma (Ozizi Buddha) na agụmakwụkwọ (ọkachasị site na akpọrọ dhamma ụlọ akwụkwọ maka ụmụaka), na nke abụọ, site na mkpọsa nke iwu iji kpuchido "agbụrụ na okpukperechi," na-ekpuchi ntụgharị, alụmdi na nwunye, ịlụ otu nwanyị na njikwa ọnụ ọgụgụ (MaBaTha Minit 2013).
Kemgbe 2012, echiche ndị Alakụba, ịkpọasị asị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ụjọ na-achịkwa okwu ihu ọha na Myanmar (Kyaw 2016; Walton na Hayward 2014). Ọ bụ ezie na o doro anya na enwere ike ịchọta echiche ndị Alakụba na oge ọchịchị, echiche ndị na-emegide Muslim na nso nso a bụ ihe nhazi (Schissler et al. 2017). Akọwawo echiche dị otú ahụ dị ka nsonaazụ nke gọọmentị na / ma ọ bụ atụmatụ ndị agha, mana ekwesịrị ịkọwa ha dị ka mmeghachi omume na enweghị ntụkwasị obi nke enweghị nsogbu n'ihi mgbanwe mgbanwe akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze kemgbe usoro mgbanwe Myanmar malitere (Walton et al. 2015 ). Dị ka Schissler et al gosipụtara. (2017), ụdị nkwenkwe a na-emegide Muslim yiri ka ọ zuru ebe nile na Buddhist Myanmar, ndị mọnk Buddhist jikọtara ya n'ihu ọha na ụyọkọ nke mmekorita Buddhist na-akpakọrịta, nke kachasị pụta bụ 969, na MaBaTha.
Nchedo nke Buddha megide egwu ma ọ bụ nke dị n'ime ala bụ isiokwu na-aga n'ihu na akụkọ Buddha, mana o doro anya na ụdị iyi egwu dị otú ahụ agbanweela ka oge na-aga. Egwu ndị a na-atụ ugbu a nwere njikọ buru ibu banyere oke emeghe, "islamization" nke Myanmar na mkpochapụ nke okpukpe Buddha, n'ihe onye mmụta Burmese bụ Nyi Nyi Kyaw (2016) kpọrọ "akụkọ ifo nke deracination." Maka MaBaTha, Islam na-eme ihe ọ bụla na egwu egwu Buddha na "ndị na-abụghị ndị mba," na-ezo aka na Rohingyas karịsịa, ndị ha na-ewere na ha bụ ndị si na Bangladesh kwabata. A na-akọwapụta nchegbu nke "ndị na-abụghị ndị mba" n'ụzọ doro anya na akwụkwọ dị iche iche nke MaBaTha, dịka ọmụmaatụ na "nkwupụta okwu 10" ha mere ka ọha na eze mara na Mandalay na nzukọ ndị mọnk na 2014, na-achọpụta isi ihe iri kachasị mkpa. Ọtụtụ n'ime ndị a metụtara ozugbo na 1982 Citizenship Law na ọnọdụ iwu nke ndị Rohingya pere mpe. Abụọ n'ime iri chọrọ akwụkwọ ahụ metụtara ndị Rohingyas: isi nke anọ na-arịọ maka nyocha nke ndị omeiwu "ndị na-abụghị nke mba" (nwere ike iwepu ndị omeiwu Rohingya), ebe isi ise na-arịọ maka iwepụ ikike nke ịtụ vootu nke ndị na-ejide "kaadị ọcha."
N'ime afọ ole na ole gara aga, U Wirathu abanyela na akụkọ ụwa. Ihe kachasị ọhụrụ bụ ihe nkiri vidio Onye di ebube W, nke egosiri na mmemme ihe nkiri Cannes na Mee 2017 dị ka ihe atụ kachasị nke akpọrọ "Buddhist extremism." Ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ụzọ ọ bụla na-agbachitere ọnọdụ U Wirathu ma ọ bụ MaBaTha siri ike megide Muslim, ọ dị mkpa ịghọta nnukwu okwu na usoro okwu dị n'azụ U Wirathu (na ndị mọnk ndị ọzọ na-eme ihe ike) ma ghara ibelata nke a na mkpịsị aka na-akpali akpali na otu ihe atụ. nke “okpukpe Buddha.” Kama nke ahụ, ọ bụ ezie na U Wirathu nwere ike ịrụ ụka, ọ dị mkpa ịghọta na ndị isi mọnk nke MaBaTha, dị ka Insein Ywama Sayadaw, ma ọ bụ Sithagu Sayadaw metụtara, nwere nnukwu nsọpụrụ na ewu ewu na Buddha Buddha. Ọzọkwa, ọ dị mkpa ịghọta mkpa nke nchegbu ha maka ọtụtụ akụkụ nke obodo Buddha na Myanmar, na na ha na-elekwasị anya na agụmakwụkwọ Buddha na ụkpụrụ omume Buddhist na-enwe nnukwu nkwado. Ọzọkwa, ọ dị mkpa iburu n'uche na ndị òtù MaBaTha na-anọchite anya nkwenkwe na nchegbu dịgasị iche iche, yana ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ụfọdụ ndị mọnk (ma ọ bụ ọbụlagodi echiche ha na-emegide Muslim) abụghị ndị niile na-akwado MaBaTha.
Okpukpe Buddha nchedo nwere njikọ chiri anya na njirimara agbụrụ Bamar, nke e weghaara n'okwu a "ịbụ Burmese bụ Buddha." Agbanyeghị, ọtụtụ n'ime mba 135 nabatara "agbụrụ mba" na-egosi na Buddhist. Ndị otu agbụrụ pere mpe dịka Arakanese (ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na steeti Rakhine nke dịdebere Bangladesh, kamakwa ụlọ nke ndị Rohingya), Mon, Shan ma ọ bụ ndị Karen ka a na-akpọ dị ka Buddhist. Okwu a "Buddhist nationalism," mgbe ahụ, na-akọwa naanị echiche nke MaBaTha dị ka mmekọrịta dị n'etiti Buddha na "mba," ma ọ bụ agbụrụ dị oke mgbagwoju anya. Ya mere, mmadụ na-efunahụ akụkụ dị mkpa nke ụdị ọhụrụ Buddhist "mba" ma ọ bụrụ na mmadụ leghaara nchegbu Buddhist anya nke (na isi ihe dị mkpa) gafere ókè agbụrụ yana nchegbu mpaghara na mpaghara.
Ndị mọnk na ndị nọn nke 969, MaBaTha / Buddha Dhamma Parahita Foundation na-agbaso okpukpe Buddha Theravada dị ka a na-eme na Myanmar ma ọ nweghị n'ụzọ ọ bụla na-eweta echiche ma ọ bụ omume okpukpe ọzọ. Kama nke ahụ, enwere ike iwere ya dị ka ndị na-eme mgbanwe ọhụụ, ebe ndị mọnk na-ewere onwe ha dị ka ndị na-elekọta okpukpe Buddha na ọdịnala mba, na-eguzogide nkwanye ugwu na ọdịbendị mba ọzọ. Otu n'ime ihe omume kachasị mkpa nke MaBaTha bụ usoro mmụta ya maka ụmụaka, nke a na-akpọ ụlọ akwụkwọ Sunday Dhamma. Schoolslọ akwụkwọ Dhamma, ekwesịrị ịdeba ama, na-achịkwa ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị mọnk, gụnyere MaBaTha. N’ụlọ akwụkwọ ndị a, ndị mọnk na-akuziri ụmụaka ụkpụrụ Buddha, yana akụkọ mgbe ochie na ọdịnala ndị Buda, ọtụtụ ụlọ akwụkwọ abụrụla isi okwu dị mkpa maka echiche nchedo Buddhist.
Ebumnuche MaBaTha kachasị mkpa (na mgbakwunye na ụlọ akwụkwọ Dhamma) bụ ịkwalite iwu anọ, nke Onye isi ala na ndị omeiwu nyefere na 2015 iji "chebe agbụrụ na okpukpe." Iwu ndị a na-achọ ịhazi alụmdi na nwunye dị n'etiti ụmụ nwanyị Buddhist na ụmụ nwoke na-abụghị Buddhist, iji gbochie ntụgharị ndị a manyere, kwụsị ịlụ karịa otu nwanyị na alụmdi na nwunye ndị ọzọ, na ịkwalite njikwa ọmụmụ na atụmatụ ezinụlọ na mpaghara ụfọdụ nke mba ahụ (Frydenlund 2018, 2017; Crouch 2016). Ndị 969 na ndị mọnk MaBaTha bidoro (ma debe iwu ahụ), ha lekwasịrị anya na Onye isi ala na ndị isi gọọmentị iji hụ na ọfịs Attorney General na-akwadebe iwu. Mgbe e mesịrị (na mmalite nke 2015) mgbe a na-atụle ihe ndị a na-edepụtara na kọmitii kọmitii dị iche iche nke ndị omeiwu, ndị na-akwado MaBaTha sonyere n'ọtụtụ nzukọ na nzukọ kọmitii iji kwado okwu ha. Na mgbakwunye na okwu ikpe a nke okpukpe Buddhist, ndị MaBaTha haziri mkpọsa mbinye aka, na-anakọta (dịka atụmatụ nke aka ya) karịrị aha 5,000,000 site na February 2014. Ọ bụ ezie na MaBaTha n'oge a na 2013 na mmalite2014 ejideghị ọha na eze ntị, ndị mọnk jisiri ike jiri ikike okpukpe ha mee ihe ma mee ka ndị mọnk chịkọta ma ndị nkịtị site na netwọ ndị mọnk ha.
Ihe dị mkpa nye mmeri ndị mọnk dị ka otu nrụgide bụ ikike ha nwere iji ikike okpukpe ha mee ihe na Buddha Buddha miri emi. Site na nkwusa, emume na saịtị dị nsọ, mkpọsa mbinye aka, na nkwukọrịta site na mbipụta na mgbasa ozi ọha na eze, ndị mọnk jisiri ike kwenye ndị ọha na eze banyere atụmatụ ha.
Na nke a, ọ dị mkpa icheta na n'okpuru ọchịchị ndị agha, ọrụ ndị mọnk nọ na mmachi na nyocha. Site na nnwere onwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke 2011, oghere ọhụụ na ohere mepere emepe maka ndị otu na-eme ihe Buda iji rụọ ọrụ ma na-ekwukọrịta n'ụzọ ọhụrụ na ike. MaBaTha anọwo na-arụsi ọrụ ike na ọrụ ndị dị otú ahụ. Ndị a gụnyere ọtụtụ ọrụ dị iche iche na-ejikọtakarị na otu ndị na-eme ihe ike ọha na eze, dị ka mkpọsa dị iche iche na ngagharị iwe ọha, ọrụ ebere ma ọ bụ enyemaka iwu na ụmụ nwanyị ime obodo. N'ime usoro ọrụ ndị ọzọ nke operandi, mmadụ atọ bara uru na-atụle ụfọdụ nkọwa ka ha na-egosi oghere ọhụụ maka mmemme ndị mọnk nke ọchịchị Thein Sein nyere, nke a na-apụghị ichetụ n'echiche tupu 2011, nke a na-agọnahụ ndị otu ndị mọnk ndị ọzọ. Nnabata nke gọọmentị nke ọrụ ndị a na-egosi n'ụzọ doro anya nnabata gọọmentị Thein Sein nke ma MaBaTha burukwa, yana usoro ha nke operandi, agbanyeghị, ekwesịrị ịdeba ama, ndị ọrụ a na-emegide gọọmentị n'onwe ya iji mee ka ọ pụta. MaBaTha chọrọ.
Dịka e kwuru na mbụ, 969 nwere njikọ chiri anya n'etiti asọmpi azụmahịa n'etiti ndị na-ere ahịa ụlọ ahịa Alakụba na ndị Buddha, ihe mmado 969 ahụ wee bụrụ akara ngosi nke ọdịmma akụ na ụba Buddha. Tinyere usoro ndị yiri nke a, ndị mọnk 969 na MaBaTha kpọrọ ka a kpọọ ụlọ ọrụ Telecom nke Qatar nwere Ooredoo, na-ahụ ya dị ka onye omeewu Alakụba si mba ọzọ na-eyi Myanmar egwu (N Htwe 2014). N'aka nke ọzọ, ejiri obi anụrị nabata Telenor nke Norway.
969 bụ netwọkụ a haziri ahazi (nke MaBaTha kpuchiri ugbu a) ma enyocha ya dị ka otu mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya na "mmebi iwu" (Klinken 2017). Ndị mọnk a ma ama bụ 969 bụ U Wirathu na U Biwuntha, ndị na-arụkwa ọrụ na MaBaTha. N'iji ya tụnyere, a na-ahazi MaBaTha mbụ (nke bụ Buddha Dhamma Parahita Foundation ugbu a) na kọmitii na-elekọta mmadụ iri ise na abụọ, mgbakọ mba na alaka na ngalaba isi na Myanmar niile. Ndị mọnk mara mma MaBaTha bụ oche Organizationtù U Tilawka Bhivamsa (nke a makwaara dị ka Insein Ywama Sayadaw), Sithagu Sayadaw na U Wirathu. Ọ dịkwa mkpa ịmara na MaBaTha gụnyere ụmụ nwanyị nkịtị na ụmụ nwoke, na-eme ka ọ bụrụ njikọ siri ike nke ndị mọnk gafee mba ahụ, gụnyere na mba asaa a na-akpọ "agbụrụ agbụrụ," dịka Shan na Karen. Ọzọkwa, njikọta nke ndị mọnk na ndị nkịtị nọ n'ọkwá dị elu mere ka nghọtahie banyere ikike iwu MaHaNas banyere otu a.
MaBaTha echewo ọtụtụ nsogbu ihu site na akụkọ ntolite ya dị mkpirikpi: echiche ndị na-emegide Muslim, ịkwalite agbụrụ na iwu okpukpe, itinye aka na esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ịchịkwa Sangha site na steeti.
Na 969, MaBaTha, tinyere plethora nke Buddhist na ndị otu mba, ka ebubo ebubo na-emegide Muslim ịkpọasị. Ndị isi mọnk dịka U Wirathu, U Rarzar, U Pamauka na U Wimala Biwuntha gosipụtara ọtụtụ nkwupụta siri ike megide Muslim, na-ekwusi ike na ndị Alakụba mpaghara bụ ihe iyi egwu nye Buddhist Myanmar. N'agbanyeghị ọdịnala dị ogologo nke udo mmekọrịta na ibikọ ọnụ (ọkachasị tupu ọchịchị Europe), Buddhist na-atụ egwu Alakụba bụ nke e wuru na akụkọ banyere esemokwu Buddhist-Muslim, nke na-ewepu akụkọ banyere ịdị adị, nnagide, na nsonye. [Foto dị n'aka nri] N'etiti echiche ndị dị otú a bụ echiche bụ na ndị Alakụba esoghị na obodo obodo, si otú a na-anọchite anya ihe "mba ọzọ," ọ bụ ezie na imirikiti ndị Alakụba bi na Mianmaa bi na ndị a ọtụtụ okpukpe Buddha maka ọtụtụ narị afọ. Ọtụtụ ndị na-ekiri ihe nkiri ahụ ekwuola na asịrị banyere ụmụ nwoke Alakụba na-edina ụmụ nwanyị Buddhist kesara na Facebook tupu mgbochi Muslim na-eme ihe ike, mana njikọ njikọ ọ bụla dị n'etiti Buddhist na-emegide Muslim ịkpọasị na ime ihe ike anụ arụ ka ga-egosi. N'oge oke agha agha megide Rohingyas malite na August 25, 2017 nke mere ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 700,000 Rohingyas gbaga Bangladesh, na-eduga ndị mọnk MaBaTha adịghị akatọ ime ihe ike megide ndị nkịtị. Kama nke ahụ, ndị isi mọnk dịka Sithagu Sayadaw nyere nkwado maka ọrụ ndị agha. N'ozizi e nyere na October 30, 2017 nye ndị agha Burmese (n'etiti arụrụala na Rakhine), Sithagu Sayadaw kwuru maka Lankan narị afọ nke ise, Mahavamsa, na otu uzo nke igbu ndi na-abughi ndi Buddha bu ihe ziri ezi (Sithagu Sayadaw, October 30, 2017). Nke a kpatara esemokwu na Myanmar ma mee ka ọtụtụ ndị Buddha (na o doro anya na Ndị Kraịst na ndị Alakụba obodo) na Myanmar (lee Radio Free Asia November 13, 2017).
Nkwado iwu nke MaBaTha na nkwalite nke agbụrụ anọ na iwu okpukpe nyere nkwado dị ukwuu. [Foto dị n'aka nri] Ọ bụghị ihe ijuanya na agbanyeghị, iwu iji chịkwaa ntughari na alụmdi na nwunye di na nwunye, na ịmanye atụmatụ ezinụlọ na mmebi iwu nke alụmdi na nwunye ndị ọzọ zutere mmegide kpụ ọkụ n'ọnụ sitere na òtù ndị na-ahụ maka ihe ndị ruuru mmadụ na mpaghara na mba ụwa maka na ọ dabaghị na nke ụwa. ụkpụrụ oruuru mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, ndị nnọchi anya mba ise nke United Nations jikọrọ aka zigara Onye isi ala Thein Sein akwụkwọ ozi na-arịọ ya ka ọ wepu iwu. Akwụkwọ ozi ahụ kwuru na “akwụkwọ iwu ọ bụla na-achịkwa ntụgharị okpukpe agaghị ekwekọ n'iwu mba ụwa maka ikike mmadụ, ebe ọ bụ na ọ ga-emebi ikike mmadụ nwere ịgbanwe okpukpe ya kpam kpam,” na Ọzọkwa, na "Ọ bụghị iwu obodo ịhazi. okwu ndị bụ akụkụ nke akụkụ dị n'ime, ma ọ bụ 'forum internum,' nke ikike mmadụ nwere nnwere onwe ikpe okpukpe ma ọ bụ nkwenye "(OHCHR 2014: 2). Ndi Amnesty International, Human Rights Watch na International Commission of Jurists kwuputara nkatọ siri ike, ha niile kwusiri ike na iwu a pụtara na mmekọrịta dị n'etiti obodo na ịgbaso ụkpụrụ oke ruru mmadụ nke mba ụwa. Tụkwasị na nke a, òtù ndị na-ahụ maka ihe ndị ruuru mmadụ nọ n'ógbè ahụ rụrụ ụka na iwu mgbanwe ga-apụta na ọ dara iwu nke 34 (na nnwere onwe okpukpe) nke Iwu n'onwe ya (Frydenlund 2018).
N'oge nhoputa ndi ochichi nke 2015 MaBaTha ndi mọnk biara ka ndi agha ndi agha jikotara aka na ndi agha Solidarity na Development Party (USDP). Laa azụ na 2014 MaBaTha kwupụtara nnọpụiche ya n'ihe banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke bụ ihe dị oke mkpa dị ka iwu ntuli aka nke Mianmaa machibidoro ndị isi okpukpe ịzọ ntuli aka. Ma mgbe e mesịrị, na 2015, na-eduga ndị mọnk MaBaTha gbara ndị mmadụ ume ka ha ghara ịhọpụta NLD na ihe kpatara na ọ bụ oke Muslim-friendly, dị ka NLD tozuru oke megide agbụrụ na iwu okpukpe na nzuko omeiwu. N'ezie, iwu "agbụrụ na okpukpe" bịara rụọ ọrụ dị mkpa na nhoputa ndi ochichi nke 2015, dịka USDP gosipụtara onwe ya dị ka onye na-echebe iwu n'ụzọ dị iche na NLD. Ọzọkwa, akwụkwọ mgbasa ozi USDP kwupụtara nke ọma iwu ndị ahụ, MaBaTha wepụtara mpempe akwụkwọ na-agba ndị mmadụ ume ka ha votu maka ndị otu na-akwado iwu. Na ala, ndị mọnk MaBaTha na-akwado USDP mgbe ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, a chọpụtawo na ndị mọnk abụọ MaBaTha sooro onye nyocha USDP na mkpọsa na Rakhine State (van Klinken na Aung 2017). N'ịbụ ndị ụjọ nwere ike ịhapụ ọtụtụ ndị Buddha, NLD kpebiri na ha agaghị agba otu onye otu Muslim na ntuli aka ahụ. Site na ịkwalite iwu (na MaBaTha na-esote) n'oge mkpọsa ntuli aka, USDP guzoro ohere megide NLD. O doro anya na USDP hụrụ mkpa ọ dị "ịkpakọba ọnụ" wee họrọ MaBaTha na iwu ha dịka ụzọ maka mkpokọta ntuli aka. Na 2017, ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke akụkụ ụfọdụ nke MaBaTha mere ka ọ bụrụ nke otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọhụrụ, nke bụ "135 Nationalities United" nke onye edemede Buddha bụ Maung Chun duziri. Ndị otu a na-arụrịta ụka dịka ndị na-akwado MaBaTha anaghị ekwenye na oke ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwekọrọ na mmemme ndị mọnk (International Crisis Group 2017).
Sangha dị na Myanmar nọ n'okpuru nchịkwa siri ike nke obodo, site na ndokwa nke iwu (dịka mwepu ndị isi okpukpe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị), Iwu 1990 metụtara Organizationtù Sangha, na mgbakwunye na ahụ dịka Kọmitii Sangha Mahanayaka State (MaHaNa). Ọzọkwa, site na otu usoro ikpe ụlọ ikpe Buddha (the Vinacchaya sistemụ) Buddhist orthodoxy na orthopraxis na-akọwapụta, na-akwado ozizi na omume "dị iche". Ihe kachasị mkpa MaHaNa bụ “ichebe okpukpe Buddha,” a pụkwara ịrụ ụka na mmachibido iwu MaHaNa iji akara 969 enweghị ihe jikọrọ ya na mmachi a na-emegide okwu ịkpọasị Muslim karịa idebe ọdịiche dị n’etiti iwu ndị mọnk na nke ngalaba ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọzọkwa, dị ka Iwu Sangha nke 1990 si kwuo, amachibidoro ịmalite ma ọ bụ ịrọ òtù ndị mọnk ọhụrụ na Myanmar. Dịka e kwuru na mbụ, MaHaNa nyere nkwado na MaBaTha, mana a wepụrụ ya mgbe NDL batara na Febụwarị 2016. Na nkwupụta na July 2016, ndị MaHaNa kwuru na MaBaTha emeghị ihe iwu chọrọ nke Iwu Sangha. , mana, ọ dị mkpa, ọ katọghị nzukọ na ọrụ ya n'onwe ha (Walton na Tun 2016). Imirikiti otu ndị MaBaTha nakweere ikike a na-agbanye ume ma na-aga n'ihu n'ọrụ ha. Agbanyeghị, isi Mandalay (Upper Myanmar) na isi obodo Karen jụrụ, na-arụ ụka na MaBaTha abụghị nzukọ Sangha. Ha rụrụ ụka na ebe ọ bụ na ọ naghị emebi Iwu metụtara Retù Sangha, ọ nweghị ihe mgbakwasị ụkwụ maka ịdọ nzukọ ahụ aka na ntị.
N'ọtụtụ echiche, MaBaTha (yana ọtụtụ ndị ọzọ na-eme ihe okpukpe Buddha) dabara n'ụkpụrụ oge ochie nke neo-traditionalism, nke a kọwara dị ka ọchịchọ ịchọrọ ịrụ ọrụ megide ọdịiche nke ụlọ ọrụ nke ọchịchị colonial, nke oge a, na nke ụwa na-eweta. Ha dabara n'ụdị oge gboo nke Buddhist na-echebe ndị otu, nke na-eto eto n'oge ngwangwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndọrọ ndọrọ ọchịchị yana enweghị ntụkwasị obi na nchekwa. Site na gọọmentị NLD nke 2016 na Aung San Suu Kyi dị ka Onye Ndụmọdụ Obodo, ọnọdụ MaBaTha dị mfe karị. Agbanyeghị, ndị otu nchekwa Buddhist bụ akụkụ dị mkpa nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Mianmaa, yana nnwere onwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba na-agbanwe obodo Burmese n'ụzọ dị egwu, a na-atụ anya ka nchedo ọdịbendị na okpukperechi bawanye. N'ikpeazụ, a na-akpọ oku "ichebe Buddha" n'ụzọ dị mfe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ntuli aka, ọ bụkwa ajụjụ na-emeghe ka otu USDP, NDL na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ ga-esi mee nke a na ntuli aka nke 2020.
Foto # 1: Ihe ngosi 969 Movement.
Foto #2: Time Magazine kpuchie na 2013 nwere ihe oyiyi nke U Wirathu, nke akpọrọ "Buddhist Face of Terror."
Foto # 3: Foto nke Sithagu Sayadaw na-eleta U Wirathyu n'ụlọ mkpọrọ.
Image # 4: Foto nke ndị mọnk na-ejide ihe ngosi ngagharị iwe Muslim.
Foto # 5: Foto nke ndị mọnk MaBaTha gbakọtara iji kwado ụzọ Mianmaa nke agbụrụ anọ na iwu okpukpe.
Egretau, Egreteau. 2011. "Burmese India in Contemporary Burma: Heritage, Influence, and Percepts since 1988." Agbụrụ Asia 12: 33.
Frydenlund, Iselin. 2018. "Ọmụmụ nke Buddha Ọchịchị nke Nnwere Onwe Okpukpe na Myanmar." Akwụkwọ akụkọ banyere okpukpe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị 4: 107-21.
Frydenlund, Iselin. 2017. "Buddha emeela ka Asia dị nro": The Modernist Construction of Buddhist as Pacifism. Pp. 204-21 n'ime Buda Buddhist Modernities: Na-echepụta ọdịnala na ụwa nke oge a, nke Hanna Havnevik, Ute Hüsken, Jacobus Teeuwen, Vladimir Tikhonov na Koen Wellens dere. New York: Ntughari.
Frydenlund, Iselin. 2017. “Nnwere onwe okpukpe maka Onye? Buddha Ndọrọ Ndọrọ Ọchịchị nke Nnwere Onwe Okpukpe N'oge Mgbanwe nke Myanmar gaa Ọchịchị Onye kwuo uche ya. " Akwụkwọ akụkọ Nordic nke Ihe Ndị Ruuru Mmadụ 35: 55-73.
Frydenlund, Iselin. 2013. "Canonical ambiguigu na iche na omume: Buddha na militarism na dịkọrọ ndụ Sri Lanka." Pp. 95-119 mu Buddha ime ihe ike: Buddha na Militarism na Asia na narị afọ nke iri abụọ, nke Torkel Brekke na Vladimir Thikonov dezigharịrị. New York: Ntughari.
Frydenlund, Iselin. 2015. Ajụjụ ọnụ, Bangkok na Yangon.
Gili, Mikael. 1993. Nationalism dị ka Paranoia ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Burma: Edemede banyere Omume Akụkọ Mere Eme nke Ike. London: RoutledgeCurzon.
Ctù Nsogbu Mba Nile. 2017. Okpukpe Buddha na ike ọchịchị na Myanmar. Akụkọ Asia: 290. Brussels, Septemba 5.
Jerryson, Michael. 2011. Buddhist iwe: Okpukpe na Ime Ihe Ike na Southern Thailand. New York: Oxford University Press.
Kyaw, Nyi Nyi. 2016. “Islamophobia na Buddha Buddha: Ndi 969 Movement na Anti-
Ime Ihe Ike Muslim. ” Pp. 183–210 na Islam na steeti na Myanmar: Mmekọrịta Alakụba-Buddha na Ọchịchị nke Nwe, nke M. Crouch dere. Oxford: Mahadum Oxford University.
Iwu MaBaTha. 2013. "Ngbanwe Okpukpe na Iwu Alụmdi na Nwunye maka Ndị Mba nke Okpukpe Dị Iche Iche na Myanmar." Sụgharịrị si Burmese. Na faịlụ na onye edemede.
Nkeji MaBaTha. 2013. So na Draft Bill Akpọrọ "Myanmar Women Special Alụmdi na Nwunye Iwu (Bill)." Sụgharịrị si Burmese. Na faịlụ na onye edemede.
N Htwe. 2014. "Nationalists Kpọọ maka Ooredoo Boycott." Oge Myanmar, June 6. Nweta site na http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/10588-nationalists-call-for-ooredoo-boycott.html na 15 March 2018.
Office nke United Nations High Commissioner maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ (OHCHR). 2014. “Iwu nke Onye Mgbasa Ozi Pụrụ Iche na Nkwalite na Nchedo ikike nke Nnwere Onwe nke Nkwupụta na Nkwupụta; Onye Mgbasa Ozi Pụrụ Iche na Nnwere Onwe nke Okpukpe ma ọ bụ Nkwenkwe; Onye Nkwado Pụrụ Iche na Ọnọdụ Ndị Na-agbachitere Ihe Ndị Ruuru Mmadụ; Onye Mgbasa Ozi Pụrụ Iche na Okwu Nke Nta; na Onye Mgbasa Ozi Pụrụ Iche na Ọnọdụ nke Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na Myanmar, ”June 19. MMR 4/2014.
Asia Egwu Redio. 2017. "Esemokwu banyere Ozizi Sayadaw nke Sitagu na Ndị Ọrụ Ndị Agha," Nọvemba 13. Nweta site na https://www.youtube.com/watch?v=W_XWdH7dVA0 na 15 March 2018.
Schissler, M., M. Walton, na Phyu Phyu Thi. 2017. "Imegiderịta emegiderịta onwe ha: Buddha-Muslim Ime Ihe Ike, Akụkọ Banyere na Ebe nchekwa na Myanmar." Akwụkwọ nke Contemporary Asia 47: 376-95.
Time Magazine. 2013. Europe, Middle East na Africa mbipụta, July 1.
Ọka mmụta, Juliane. 2011. Okpukpe Buddha oge a na Myanmar: Ihe Nkume Omenala, na Ọha Obodo. Honululu: Mahadum nke Hawai'i Press.
Sithagu Sayadaw. 2017. Nweta site na https://www.youtube.com/watch?v=GAukEq-GzMs na 30 October 2017.
Turner, Alicia. 2014. Ichekwa okpukpe Buddha. Ọdịdị nke okpukpe na Burma Colonial. Honululu: Mahadum nke Hawai'i Press.
van Klinken, Gerry, na Su Mon Thazin Aung. 2017. "Ọchịchị na-ese okwu banyere Mgbapụ Alakụba Alakụba na Myanmar." Akwụkwọ nke Contemporary Asia 47: 353-75.
Walton, Matthew J. 2017. “Nghọtahie nke Myanmar Ma Ma Tha.” Oge Asia, June 9.
Walton, Matthew J. na Aung Tun. 2016. "Ihe State Sangha Committee n'ezie kwuru banyere Ma Ba Tha." Okirikiri tii, 29 Julaị.
Walton, Matthew J., M. McKay, na Daw Khin Mar Mar Kyi. 2015. "Womenmụ nwanyị na Myanmar 'Iwu Nchedo Okpukpe'." Nyocha banyere Okwukwe na Okwu Mba Nile 13: 36-49.
Walton, Matthew J. na Susan Hayward. 2014. Na-akwado Buddhist Narratives: Democratization, Nationalism, na Ime Ihe Ike Ọchịchị na Myanmar. Nnyocha Iwu, 71. Honolulu, HI: Ebe Ọwụwa Anyanwụ-West.